Shir Gaar Ah Oo Lagaga Hadlayo Arimaha Dalka Somaliya Oo Maanta Ka Furmaya Xarunta Qaramada Midoobay |
Shir Gaar Ah Oo Lagaga Hadlayo Arimaha Dalka Somaliya Oo Maanta Ka Furmaya Xarunta Qaramada Midoobay
Hargeysa(GNN):-shir gaar ah oo lagaga hadlayo arimaha dalka somaliya ayaa la filayaa inuu maanta ka furmo xarunta qaramada midoobay ee New York.
Shirkan ayaa waxa si wada jir ah u gudoomin doona madaxweynaha somaliya iyo xoghaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon, waxaana la filayaa inay ka soo qayb galaan madax ka socota dalka caalamka.
Shirkan ayaa lagu eegi doonaa arimaha dalka somaliya gaar ahaana dhinaca siyaasada, amniga, hiigsiga dawlada somaliya ee 2016-ka iyo guud ahaanba hawlaha hor yaala dawlada somaliya ee la doonayo inay ku dhamayso inta aan la gaadhin dabayaqaada sanadka soo socda.
Mas’uuliyiinta Shirkan ka Qayb-galaya ayaa waxaa ka mid ah Ra’iisul Wasaaraha Somalia Cumar C/rashiid Cali
Sharma’arke oo shalay ka dhoofay Muqdisho, iyadoo markii uu ka dhoofayay Dalka la sheegay inuu ka Qayb-galayo shir gaar ah oo looga Hadlayo Arrimaha Somalia.
Sidoo kale, Madaxweynaha Somalia ayaa Kulammo Wuxuuu la Qaadan doonaa Dhamaan madaxda ay ciidamada ka joogaan Somalia, kaasoo looga hadli doono Ammaanka, sida uu sheegay Afhayeenka Madaxtooyada Somalia, Daa’uud Aweys.
Ugu dambeyn, Madaxweynaha Somalia ayaa lagu wadaa inuu kulammo gaar ah la Qaato Boqorka Jordan iyo Ra’iisul Wasaaraha Dalka Britain, David Cameron. Isagoo kala hadli doono sidii ay u caawin lahaayeen Somalia.